PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-24 - Abalingisi bathumbe izikhulu ZESABC
Abalingisi bathumbe izikhulu ZESABC
Ilanga langeSonto - 2018-06-24 - Front Page - LUCKY CAIN
KUSUKE esinamathambo, abalingisi bomdlalo kamabonakude bethumba izikhulu zeSouth African Broadcasting Corporation (SABC), befuna imali yabo yomholo ngolwesihlanu.
Kubikwa ukuthi abalingisi abebedinwe begane unwabu bebeshaya phansi ngonyawo, bethi lezi zikhulu ngeke bazidedele bengakayitholi imali abakweletwa yona - kusize ukuba kuze kubizwe amaphoyisa.
Lesi sigameko senzeke eshakaland ngaseshowe, KwazuluNatal, lapho kuqoshelwa khona umdlalo omusha ozosakazwa KWISABC, Uselwa, othinta umlando wakwazulu.
Okhulumela ISABC, umnu Kaizer Kganyago, usiqinisekisile lesi sigameko KWILANGA Langesonto.
Utshele leli phephandaba ukuthi yibona, ekomkhulu leSABC egoli, ababize amaphoyisa ukuze ayophephisa izisebenzi zabo.
“Nakuba kungabanga yisigameko esitheni kodwa bekumele sibize amaphoyisa ukuze akwazi ukuphephisa izisebenzi zethu ezigcine zishiywa yibhanoyi elibuyela egoli ngenxa yokuvimbezeleka,” kusho umnu Kganyago.
Ngokuthola KWELANGA LangeSonto, lezi zikhulu ZESABC beziyophenya ngezikhalo zokungak hokhelwa kwezisebenzi zalo mdlalo, okuhlanganisa kuzo abalingisi nabanye abasethimbeni eliwukhiqizayo.
Kulezi zikhulu kubikwa ukuthi bekukhona i- head of drama, owe- production, nowezemali. Kuthiwa zitshelwe emakhaleni ukuthi ngeke zihambe ingaphumile imali yomholo.
Umthombo uthi esinye salezi zikhulu zithinte izikhulu ezisegoli, ekomkhulu lale nhlangano, zibika ngesimo ezibhekene naso - yilapho kubizwe khona abakwasidlodlo.
Phambilini abalingisi babikele ISABC ngokunga khokhelwa yinkampani eqopha lo mdlalo, ebizwa ngo- kuthi YICNT Productions.
Umthombo ongaphakathi, ethimbeni elisebenza kulo mdlalo, upotshozele leli phephandaba ukuthi abalingisi nabanye abasebenza kuwo babeke phansi amathuluzi bekhala ngokungaholelwa.
“Sekudlalwe ngathi kakhulu, silokhu sithenjiswa ukuthi sizohola kodwa kuze kube yimanje asiholile yingakho sikhethe ukuba sishiye phansi umsebenzi ngoba kuyacaca ukuthi senziwa izilima,” kusho umthombo nawo okhala ngokuthi awuholile.
Lezi zisebenzi ezingaholelwe zisola umdidiyeli omkhulu walo mdlalo (esingalith olanga igama lakhe) ngokudla imali njengoba zithi ISABC ibisiyikhiphile ingxenye ethile yemali, elinganiselwa ku-r4 million, nakuba kuthiwa kutholakale ukuthi le nkampani ino-r13,65 kwi-akhawunti yayo yasebhange.
“Uma simfuna akasatholakali. Ngeke siqhubeke nokuqopha singaholile ngoba sekukaningi kudlalwa ngathi,” kuqhuba umthombo.
Uferry Jele, ongomunye wabalingisi abanohlonze abakhona kulo mdlalo, ukuqinisekisile ukuthi zikhona izinkinga ezithinta ukungaholi kwabasebenza kulo mdlalo nabalingisi.
“Nakuba ngiziphathelwe wumkhuhlane kodwa kukhona abangakaholi kuze kube yimanje ekubeni bekumele ngabe sebeholile. Kuyiqiniso ukuthi kusamile ukuqoshwa njengoba nami sengibuyele egoli,” kusho uferry.
Yonke imithombo ehlukene ekhulume naleli phephandaba izwakalise ukudinwa ngalokhu kungakhokhelwa.
Umnu Kganyago akafunanga ukuphumela obala mayelana nokuthi bazothatha siphi isinyathelo ngale nzukazikeyi.
“Okwamanje ngeke ngikwazi ukuphawula ngokugcwele ngenxa yokuthi sisalinde umbiko ogcwele ethimbeni ebesilithumele,” kusho umnu Kganyago.
Ukuqinisekisile ukuthi bese bekhokhe ingxenye elinganiselwa ku-r4 million enkampanini ekhiqiza umdlalo kodwa kusasele ingxenye ethile abebezoyikhokha uma sekuphothuliwe ukuqoshwa.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, bekumele kuphothulwe ngawo ulwesihlanu ukuqoshwa kwalo mdlalo njengoba kulindeleke ukuba ungene emoyeni ngoncwaba (August).
Phakathi kwabalingisi abanohlonze abakhona kulo mdlalo kubalwa uxolile Tshabalala, Simphiwe Ngema, Thabo Mnguni, Mac Mathunjwa noncibijana Madlala.
Sekudlalwe ngathi kakhulu, sithenjiswa ukuthi sizohola kodwa kuze kube yimanje asiholile.
UQWEQWE lomlingisi emidlalweni kamabonakude, uxolile Tshabalala, ungomunye wabalingisi abaqopha emdlalweni omusha WESABC, Uselwa, osekusuke umsindo ngawo njengoba kukhona abalingisi abakhala ngokuthi abaholelwe.
ISITHOMBE NGABE: INSTAGRAM
UFERRY Jele ongomunye wabalingisi ababoshelwe emdlalweni omusha WESABC, osekusuke umsindo ngawo.